यी हुन् अन्धोपनाबाट बच्ने उपायहरु ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
यी हुन् अन्धोपनाबाट बच्ने उपायहरु !
चितवन, २५ असोज । मानव शरीरको संवेदनशील अङ्गका रुपमा रहेको आँखाको सुरक्षा गर्न सके दृष्टिविहीन हुनबाट बच्न सकिने नेत्र विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार पाँच कारणबाट अन्धोपना हुने गर्दछ । भरतपुर आँखा अस्पतालका वरिष्ठ आँखा स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक बिमल पौड्यालका अनुसार मोतिविन्दु, जलविन्दु, आँखामा लाग्ने चोटपटक, मधुमेह, भिटामिन ‘ए’को अभावका कारण अन्धोपना हुने गर्दछ । पहिले ट्रकोमाका कारण पनि अन्धोपना हुने भए पनि हाल त्यसको उन्मूलन भएको उनले बताए । विशेषत ४० वर्ष नाघेका सबैले समयमा आँखा परीक्षण गरेर बेलैमा शल्यक्रिया गरेमा मोतिविन्दुबाट बच्न सकिन्छ । पौडेलका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष दुई लाख जना नेपालीको मोतिविन्दुको शल्यक्रिया हुन्छ । थप ३० हजारले शल्यक्रियाका लागि हरेक वर्ष पर्खनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अन्धोपनाको अर्को कारण वंशाणुगत रोग जलविन्दु हो । जलविन्दु लागिसकेपछि पुनः दृष्टि फर्काउन कठिन हुन्छ । समयमै पत्ता लागेमा रोगथाम गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । आँखा रोग विशेषज्ञ डा पुष्पा गिरी ४० वर्ष नाघेका व्यक्तिले आँखाको चाप परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । समय समयमा आँखा परीक्षण गरेर यो रोगको रोगथाम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्धोपनाको अर्काे कारण चोटपटक हो । आँखामा चोटपटक लागेमा अल्सर भएर फुलो पर्ने गर्दछ । डा गिरीका अनुसार यस्तो अवस्थामा हेलचेक्र्याईं नगरी तत्काल चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार थालेमा आँखा बचाउन सकिन्छ । नेपालमा आफूखुशी औषधि प्रयोग गरेर धेरै दृष्टिविहीन भएका छन् ।
पछिल्लो समय मधुमेहका बिरामी थपिँदै गएसँगै उनीहरुको आँखा उच्च जोखिममा रहने चिकित्सकहरु बताउँछन् । समय समयमा परीक्षण नगरेमा अकस्मात अन्धोपना हुनसक्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दृष्टि फर्काउन मुस्किल पर्छ । डा गिरिको भनाइअनुसार मधुमेहका बिरामीले समय समयमा आँखाको परीक्षण गरेमा आँखाको ज्योति गुम्नबाट बच्न सकिन्छ । बालबालिका जन्मदैमा अन्धोपना भएको हुन सक्छ । त्यस्ता बालबालिका पढाइमा पनि कमजोर हुने गर्दछन् । कक्षाकोठाको पाटीमा लेखेको नदेख्ने समस्या हुन सक्छ । समयमै परीक्षण गरेर उपचार थालेमा बालबालिकालाई अन्धो हुनबाट जोगाउन सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । डा गिरि भन्छन्, “बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपूर्व आँखाको परीक्षण गर्न सकेमा दृष्टिविहीन हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।”